Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta Oo Salaasa Ay Qoreen Wargeysyada Waaweyn Ee Yurub.
Wednesday July 29, 2020 - 22:08:26 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Suuqa iibka ciyaartoyga ayaa si ramsi ah u furmay, waxaanay kooxuhu si toos ah u bilaabeen inay lasoo wareegaan ciyaartoyda
ay danaynayaan, laakiin intii ka horreysa ayay sii dhaceen heshiisyo qaab qaddimaad ah ay kooxuhu usii samaynayeen, maadaama lasoo gabogabeeyey horyaalladii waaweynaa sida Premier League, Laliga, Bundesliga iyo Ligue 1 oo la kanslay, halka Serie A-da Talyaaniga maalmo kaddib uu soo dhamaan doono.
Warbaahinta dunida ayaa si joogto ah usoo bandhiga xogta ugu dambaysa ee suuqa ee maalinlaha ah iyo dhaqdhaqaaqa naadiyadu sida hoose ee qarsoodiga ah u wadaan. Waxa kale oo ay soo gudbiyaan xanta aan xaqiiqadeeda la hubin iyo tuhunnada isku xidhiidhinaya ciyaartoyda iyo kooxaha qaarkood.
Sidii aad nooga barateen, waxa aanu si joogto ah idiinku soo gudbinaa xogta u dambaysa ee suuqa, hadal-haynta, xanta iyo xanta jirta intaba, waxaananu maanta oo Salaasa ah idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada Yurub:
Manchester United ayaa dalab £89 milyan oo Gini ah ka gudbisay laacibka reer England ee 20 jirka ah ee garabka weerarka ka ciyaara, laakiin Borussia Dortmund ayaa soo diidday dalabka United. (Bild)
Man United waxay rajaynaysaa inay Borussia Dortmund ay tanaasul ka samayn doonto qiimaha ay ku xidhay Jadon Sancho oo £110 milyan oo Gini ah, isla markaana uu laacibkani xagaagan iman doono Old Trafford. (Telegraph)
Kubbad sameeyaha Aston Villa ee Jack Grealish ayaa bartilmaameed u ah Manchester United, laakiin 24 jirkan reer England wuxuu ogyahay in aanu kulan kasta kusoo bilaaban doonin haddii uu tago Old Trafford. (Independent)
Chelsea waxay tixgelin doontaa inay iibiso goolhaye Kepa Arrizabalaga oo 25 jir ah, haddii laga soo gudbiyo dalab £50 milyan oo Gini ah, haddii kalena waxay u raadin doontaa amaah. Blues ayaa doonaysa goolhayaha Burley ee Nick Pope oo 28 jir ah iyo Andre Onana oo ah 24 jir ka tirsan Ajax oo u dhashay Cameroon. (Mail)
Khadka dhexe ee Leicester City ee James Maddison oo 23 jir ah, ayaa saxeexay heshiis cusub oo usbuucii uu ku qaadanayo £110,000 Gini, isla markaana King Power kusii hayn doona illaa sannadka 2024. (Goal)
Chelsea markii ay badbaadsatay booskeeda Champions League ee xili ciyaareedka dambe, waxay wada hadallo la furtay Bayer Leverkusen oo ay kala hadlayso lacagta xiddiga khadka dhexe ee Kai Havertz oo 21 jir ah. (Guardian)
Crystal Palace waxay go’aansatay inay dhegaysato dalabyada laga soo gudbiyo weeraryahankeeda Wilfried Zaha, waxaana 27 jirkan reer Ivory Coast raadinaysa Everton. (Mirror)
Kaddib markii ay ku fashilantay inay boos ka hesho tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe, Leicester Ctiy waxay halis ugu jirtaa inay lumiso difaaceeda bidix ee Ben Chilwell oo ah 23 jir ay doonayaan Chelsea iyo Manchester United. (Sun)
Xiddiga reer Brazil ee Willian oo 31 jir ah, wuxuu ogolaan karayaa inuu Chelsea heshiis cusub u saxeexo dhamaadka toddobaadkan inkasta oo ay istaageen wada-hadalladii labada dhinac. (Sky Sports)
Kooxda horyaalka LaLiga ee Real Betis waxay doonaysaa difaaca Manchester City iyo xulka qaranka Argentina ee Nicolas Otamdendi oo 32 jir ah, kaas oo City ay rajaynayso inay ku beddeli doonto Nathan Ake oo ah 25 jir ka tirsan Bournemouth oo heerka labaad u degtay. (Mail)
Kubbad-sameeyaha reer Brazil ee Philippe Coutinho ayaa ka codsaday Arsenal inay siiyaan waqti uu kaga fikiro mustaqbalkiisa, iyadoo laacibkan Barcelona ay danaynayaan Leicester City iyo Tottenham. (Sport)
Tottenham ayaa qarka u saaran inay dhamaystirto heshiiska kubbad-sameeyaha reer Denmark ee Pierre-Emile Hojbjerg oo 24 jir u ciyaara Southampton. Spurs ayaa gudbisay dalab £15 milyan oo Gini ah inkasta oo ay Saints £25 milyan dalbatay. (Sky Sports)
Bayern Munich waxay doonaysaa difaaca bidix ee Norwich City ee Max Aarons, waxaanay 20 jirkan diyaar ula tahay inay ka bixiso £18.3 milyan oo Gini. (Sky Sports)
Manchester City ayaa ku raad-joogta difaaca reer Wales ee Cameron Coxe oo xor ka noqday Cardiff City markii uu dhamaaday heshiiskiisu. Laacibkan ayay da’diisu tahay 21 jir. (Wales Online)